Fantatra amin'izay ny fantany izao, #MyHodgesStory »Hodges U
Fantatra amin'izay izay fantany izao
Fantatra amin'izay ny fantany izao - #MyHodgesStory Martha "Dotty" Faul
Ela be talohan'ny nisoratra anarana tao amin'ny University of Hodges i Martha "Dotty" Faul dia nandany 20 taona nanangana asa amin'ny fampiharana ny lalàna izy tao amin'ny biraon'ny Sheriff County DeSoto sy ny biraon'ny Sheriff County Charlotte.
Nanomboka tamin'ny fisafoana an-dalambe niasa ho toy ny lefitra sheriff ka hatramin'ny famahana ny famotopotorana heloka bevava ho mpitsikilo dia hitan'i Faul ary nanatri-maso izay tsy azon'ny maro eritreretina fotsiny. Nipetraka teo anilan'ny lalàna izay mora tohina amin'ny zava-misy ratsy sy henjana ateraky ny olombelona i Faul, nisotro ronono tamin'ny volana aogositra 2009 ary nanokatra ny orinasany manokana, Justice Investigations Services, Inc.., tamin'ny 2010 ho fomba hanolorana ny fanampiany an'ireo mila fanampiana.
Raha teo am-piandohan'ny fanokafana ny orinasany dia tsapany fa manan-danja ny diplaoma azo omena amin'ny fananganana ny orinasany. Nandritra ny niasany tao amin'ny Biraon'ny Sheriff Charlotte County, nisy solontena avy amin'ny Hodges University (fantatra amin'ny anarana hoe College International) nitsidika ny firesahana ny momba ny fampianarana.
"Manenina aho fa tsy nandray azy ireo tamin'ny tolotr'izy ireo," hoy izy nihomehy. “Fa rehefa tonga ny fotoana hiverenana an-tsekoly dia tadidiko i Hodges, ka dia niditra an-tsekoly tao amin'ny sekolin'ny orinasa aho tamin'ny 2009.”
Rehefa avy nandany enim-bolana tamin'ny programa fandraharahana sy niasa tamin'ny varotra tany amin'ny morontsiraka atsinanan'i Florida izy dia nahatsapa i Faul fa ny talentany dia mifanaraka kokoa amin'ny fitsarana heloka bevava fa tsy amin'ny asa aman-draharaha, noho izany dia nanova fandaharam-pianarana diplaoma izy, naka ny kilasy rehetra nataony tamin'ny Internet.
Amin'ny maha-mpianatra an-tserasera azy, dia niaiky izy hoe: “Tena tsapako fa nahazo fifantohana bebe kokoa aho satria navelan'ny talen'ny fifanakalozan-kevitra hevitra hiteny aho, ary nisy ny mpampianatra tonga teo. Tsy nila niasa saina aho sao lany ny fotoana any am-paran'ny kilasy ary hihazakazaka mankany aloha hametraka fanontaniana amin'ny profesora. ”
Nahatsapa ny traikefa an-taonany momba ny fampiharana ny lalàna ho an'ny fandaharam-pianarana i Faul, nahatsapa i Faul fa ny ankamaroan'ny asany matihanina dia nifantoka tamin'ny faritra iray fotsiny, ary ny fomba nanomezan'ny lesona fampianarana hevi-dehibe momba ny kianja midadasika izay ny fitsarana heloka bevava.
“Ny fampianarana dia nampianatra ahy momba ny fitantanana, ny fanitsiana ary ny fahamarinana ho an'ny zaza tsy ampy taona. Betsaka ny zavatra fantatro momba ny tantaran'ny fitsarana heloka bevava sy ny fomba hanatonan'ireo kolontsaina samihafa ny fitsarana heloka bevava, ”hoy izy.
Mahazo azy Diplaoma bakalorea amin'ny fitsarana heloka bevava tamin'ny 2012, nifantoka tamin'ny ezaka nataony tamin'ny fananganana ny orinasany izy. Izy sy ny ekipany manam-pahaizana momba ny famotopotorana 20 dia miasa miaraka amin'ny fanjakan'ny Florida mba hanampiana ireo olona sahirana amin'ny rafi-pitsarana heloka bevava izay tsy afaka miaro fiarovana ara-dalàna. Miara-miasa akaiky amin'ny mpisolovava i Faul sy ny ekipany mampiasa ny fahaizany manampy amin'ny fanangonana zava-misy, porofo ary vaovao hananganana tranga mahomby.
Raha toa ka manomboka amin'ny hosoka ka hatramin'ny famonoana olona hatrany ny raharaha, Faul dia mampiasa ny fahaizany amin'ny fitadiavana lainga sy fisolokiana hanampiana amin'ny famotorana; na izany aza, noho ny toetran'ny orinasany sy ny fifamatorany amin'ny rafitra ara-dalàna dia nitodika tany amin'i Hodges indray izy hanohy ny fianarany, tamin'ity indray mitoraka ity ihany dia nandalina ara-dalàna.
"Niresaka tamin'i Dr. [Char] Wendel aho, ary nilaza tamiko izy fa ny fandalinana ara-dalàna dia tsy mitovy amin'ny fitsaràn'ny heloka bevava, saingy hitako fa tiako io, ary tena mifanome tanana izy roa," hoy izy. .
Misoratra anarana ao amin'ny Tompon'ny siansa amin'ny fandalinana ara-dalàna fandaharam-pianarana diplaoma amin'ny 2016, nanaiky i Faul fa ny fandaharam-pianarana sy ny fanendrena azy dia nahafahany nandray anjara tamin'ny orinasany tamin'ny fomba vaovao tanteraka. Mianatra momba ny torts, ny fanarahan-dalàna ary ny fampahalalana momba ny tranga, i Faul dia mampiasa ny fahalalana hanampiana amin'ny fanovana ny fomba azony sy ny ekipany manampy tsara an'ireo mpisolovava azy ireo.
“Ny fahalalana ny fomba fiasan'ny lalàna dia manampy anao bebe kokoa rehefa eny an-dalana ianao. Raha fantatro izay hitranga ao amin'ny efi-pitsarana sy ny antony ilàn'izy ireo zavatra sasany, dia hanatsara kokoa ny raharaham-pitsarana izany, ”hoy ny fanazavany. "Ankehitriny, etsy ankilany, fantatro izay tokony ho nataon'izy ireo, mba hahafahako manolotra izany amin'ireo mpisolovava ahy hanampy azy ireo."
Herinandro vitsivitsy sisa tavela talohan'ny nahazoany diplaoma tamin'ny desambra 2017 niaraka tamin'ny mari-pahaizana maodera dia manantena ny handray ny fahalalany sy ny traikefany matihanina i Faul ary hanitatra ny talentany eo amin'ny sehatry ny fampianarana.
“Nandia zavatra maro samihafa aho, ary te hamerina ny sasany amin'izany, ary ny fampianarana dia fomba tsara hanatanterahana izany. Mba hahafahako mizara ny sasany amin'ireo zavatra niainako ary mizara ny sasany amin'ny fahalalana nianarako sy ny fomba fampiharana azy - mety ho tena mahafaly ahy izany. ”
Tags: Criminal Justice, Oniversite Hodges, HodgesU, Legal Studies, Martha Faul, Mpampianatra momba ny ara-dalàna, Mijanona eo akaikin'ny lavitra